सुराकी पत्रकारलाई नियुक्ती दिने मिडिया कुन ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २१ माघ २०७५, सोमबार १७:२९ लेखक नेपाली जनता
संगठन र संस्थाको नाममा अबैधधन्दा गर्दै आफुलाई ठूला व्यवसायी हुँ भन्दै सरकार र जनतामा समेत झुट बोल्दै आउने व्यवसायी र पत्रकारको परिचय पत्र बोकेर ‘सुराकी’ गर्ने पत्राकारका कारण आमसंञ्चार माध्यम बदनाम हुदै गएको छ । विश्वको धनीको सूचीमा नाम लेखाएर देशमा अर्बौ रुपैयाँ करछली गर्ने र नक्कली विलमार्फत अर्बपति बनेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका संसद बिनोद चौधरीसंग भएका पत्रकार र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानसंग भएका पत्रकार उही रुप र व्यवहोरा भएका सुराकी पत्रकार हुन ।
चौधरले कर छली ग¥यो, नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) विल प्रयोग ग¥यो र उसले उत्पादन गरेको वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तहिन छ भनी समाचर लेख्दा ‘समिट होटल कुपण्डोल’ मा मदिरा पार्टी गरी विरुद्धमा समाचार लेख्नेमाथी ‘गुण्डा’ लगाएर ठिक पार्नु पर्छ भनेर सल्लाहा दिने पनि यहीका आफुलाई बरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हुँभन्दै हुँकार गर्ने समुह हो । सो समुहले पत्रकारमाथी आक्रमण गर्नु पर्छ यहाँको पक्षमा हामी ठूला लगानी भएका मिडिया छ, बढी लेखेमा गुण्डा लगाएर ठिक पार्नुपर्छ भन्ने र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानसंग लुटपुटगरी गोप्यरुपमा रेकर्ड गरेर बार्गेनिङ गर्ने पत्रकार एकै हुन । दुवै प्रकृया गलत हो। त्यस्तो गर्ने पत्रकार हैन ‘सुराकी’ हुन । उनीहरुले पत्रकारको आबरणमा सूचना बेच्दै आएका छन् र देशमाथीनै बलत्कार गर्दै रातारात धनी भएका पत्रकार हुन ।
काम सुराकी, देशको गोप्य सुचना बेच्दै आउने ९८ प्रतिशत पत्रकारलाई कुन कुन मिडिया हाउसहरुले नियुक्ती ग¥यो भन्ने प्रश्न अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । काम सुराकी अनी परिचय पत्र पत्रकारको बोक्नेलाई सम्बन्धित निकायबाट किन अनुगमन हुदैन । कि नेपाल पत्रकार महासंघ र सूचना विभाग पनि सुराकी सस्ंथा हो ?
नभएर पत्रकारिताको आबरणमा गैरकानुनी कार्यगर्नेमाथी ती संस्थाहरुको ध्यान किन गएन । हाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषध्यक्ष प्रधानले बोलेको कुरालाई रेकर्ड गरेर सोही संस्थाकी अध्यक्ष भबानी राणालाई सुनाएको भन्दै चर्चापरिचर्चा भयो । पत्रकारिताको धर्म र स्रोतलाई गोप्य राख्नु पर्ने भनिएको अबस्थामा रकम लिएर सार्वजनिक गरिन्छ भने त्यसको खोजी पत्रकार महासंघले किन गर्दैन ? एउटाले गरेको गल्ती किन सबैमाथी लगाइदा पनि चुप छ पत्रकार महासंघ ।
महासंघको ढेडवर्षे अबधि पुरा हुनैलाग्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र महासंघको आँडमा गरिदै आएको अनियमिकताकै कारण वर्तमान कार्यसमितिभित्रै शितयुद्दनै चलेको पक्कै हो । सो समाचार पटकपटक प्रकाशन गर्दै आएका छौ । सोही विषयले महासंघभित्र चलेको विवादले उग्ररुप लिएपछि अन्न्त कोषाध्यक्ष प्रधानले पदबाट राजीनामा दिए । उनले आफुले गरेको गल्तीलाई लुकाउदै झुट बोल्दै दोष लगाए पत्रकारले रेकर्ड सुनाएर मैल नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएको रे । एक घण्टाको भाषणपछि मौखिक रुपमा प्रधानले राजीनामा दिएसम्म भन्ने सक्नेले किन रेकर्ड अध्यक्ष राणालाई बुझाउने पत्रकारको नाम भन्न सकेनन् । त्यसैले यहाँ पत्रकारको नाम लिएर अबैधधन्दा गर्ने गरेका हुनकी भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सो बारे पनि खोजी हुन आबश्यक छ । नत्र गल्ती गर्ने आफु अनी दोष पत्रकारलाई लगाउने कार्यले तीब्रता पाउने छ। यहाँ पत्रकार सत्य बाटोमा बसेर कलम चलाएको छ भन्न पनि कठिन यहाँ पत्रकार सत्य बाटोमा बसेर कलम चलाएको छ भन्न पनि कठिन छ । घर जान ५ लिटर पेट्रोल माग्नेदेखि बसको टिकट समेत काटिदिन परो हजुर भन्दै लम्पसार हुने पत्रकारहरु पनि नभएका हैनन। यसैगरी माग गर्न गएको पत्रकारले मागेको कुरा नपाएपछि सो अबैध गैरकानुनी कार्य नगरेभन्न पनि सकिदैन ।
सोही भएको होकी प्रधान र सुराकी पत्रकारबीच । जे होस गैरकानुनी र पत्रकार आचार सहिंता विपरित काम गर्ने जो कोहीलाई पनि पत्रकार महासंघले खोजी गरी कारबाही गरिनु पर्छ । यहाँ लेख्न खोजीएको ज्ञानेन्द्रले किन दिए राजीनामा अनी किन भयो वाकयुद्द भन्नेमा हो । बाणिज्य महासंघको २०७६ चैत २८ र २९ गते हुने बार्षिक साधारण सभा (नयाँ नेतृत्व चयन) बाट आफ्नो पक्षमा नेतृत्व चयन गर्ने र गराउने उदेश्यले सुरु भएको खेलकै कारण महासंघभित्र चर्को विवाद पर्दै आएको थियो । सो अधिबेशनमा विद्यमान विधानअनुसार बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने खेल या अध्यक्षको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने समेतको खेल सुरु भइरहेको छ ।
महासंघभित्र प्रायः शक्तिमै बसी रहेका पुर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालको दबदबा बढ्दै गएपछि र वर्तमान अध्यक्ष भबानी राणाले ढकालको इसारामा संस्थागत निर्णय गर्दै गएको भन्दै ‘चण्डी ढकाल हटाउ अभियान’ महासंघकै निर्वतमान अध्यक्ष र कार्यसमितिकै कोषाध्यक्षको समुह लागी परेपछि महासंघमा बिबादकोले तिब्रता लिएको पक्कै हो । पदबाट को बाहिरीन्छ को भित्रिन्छ त्यो ठूलो कुरो हैन । कुरोत त्यो हो उसले किन राजीनामा दियो भन्ने हो । कोषध्यक्ष प्रधानले पदबाट दिएको राजीनामाबाट झन महासंघभित्र विवादले उग्ररुप लिएको पुष्टी भएको छ । महासंघका पुर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, बर्तमान कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, शेखर गोल्छालगायतको समुह ढकाल र राणाको कार्यकाललाई असफल बनाउने खेल खेलेको भन्दै राणाले बैठकमा विरोध गरेपछि सो मुद्दाले विशेष प्राथमिकता पाएको छ ।
महासंघभित्र सुरु भएको अनियमिकता र गैरकानुनी कार्यको बारेमा मैले पटकपटक समाचार प्रकाशन गरे । गतसाता सो संस्थाभित्र विद्यमान विधान संशोधनदेखि महासंघभित्र भएको अनियमिकताका बारेमा समाचार प्रकाशन गरिएको थियो । एकातर्फ महासंघको नेतृत्व हत्याउने रणनीति रहेको छ भने अर्कोतर्फ महासंघको मातहतमा रहेको कृषि सम्बन्धी काम गर्ने ‘कृषि उद्यम केन्द्रको बजेटमा भएको घोटलाका कारण पनि महासंघमा विवालले उच्चरुप लिएको हो । पैसा देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र भने झै भएको हो वाणिज्य महासंघमा । कस्ले कुन तबरबाट रकम आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने खेल भएको हो र भई रहेको छ । त्यही अनुसार सो केन्द्रले सञ्चालन गरेको योजनाबाट वार्षिक ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएपछि र सो रकमको बाँडफाँडमा गोलमाल गरेपछि सो अनियमिकताबारे बाहिर आएको हो ।
महासंघअन्तर्गतको सो केन्द्रलाई नेपाल सरकार र विदेशी दाताले हरेक वर्ष सरदर ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट दिँदै आएको छ । महासंघको सो केन्द्रबाट हालसम्म ११ करोड रुपैयाँ पेश्की कसले लगेको हो भन्ने प्रमाण समेत अहिले सम्म महासंघको केन्द्रमा छैन ।
पेश्की लिएकाबाट कुनै पनि कागजात र विल समेत छैन । पेश गरेको विल नक्कली रहेको छ । महासंघको आँडमै गरेको अनियमिकतालाई ढाकछोप गर्न अहिले अध्यक्ष राणा लागी परेकी छिन् । किनकी सो बारे उनीपनि संलग्न भएको प्रमाणित भएको छ । गत आइतबार बसेको महासंघको कार्यकारीणी बैठकमा कोषाध्यक्ष प्रधानले मौखिक रुपमा राजिनामा दिएसंगै महासंघभित्र हुने अबैध कार्यको भण्डाफोर हुन पुगेको छ । उनले लिखित रुपमा सोमबार महासंघमा राजीनामा पत्र पेश गरेसंगै सो संस्थाभित्र भएको अनियमिकताको विवरण समेत बाहिर आउनेक्रम जारी रहेको छ ।
प्रधानले महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र र अन्य विषयमा आफुलाई समेत मुछेर समाचार आएपछि आफुले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । प्रधानको राजीनामा स्विकृत आईतबारनै स्वीकृत भइसकेको महासंघले जनाएको छ। सो केन्द्रको नाममा भएको अनियमिततालाई लुकाउन छानबिन समिति गठन गरेको छ। अध्यक्ष राणाले महासंघकै वरिष्ठ सदस्य शकुन्तलाल हिराचनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकी छन् । एकातर्फ पत्रकारले रेकर्ड सुनायो भन्दै बैठकमा आक्रमक रुपमा उत्रिएकी अध्यक्ष राणाले सोही रातनै मौखिक रुपमा दिएको राजीनामा कसरी स्वीकृत भयो ? अहिलेसम्म लिखित रुपमा महासंघमा राजीनामा दिएको आधिकारीक छैन । तर पत्रकारलाई दोष दिने र दोषी बन्ने पत्रकार आचार संहिता अनुसार पत्रकार हैन उसैको कार्यकर्ता हो । खोजी गरी कारबाही हुनु आबश्यब छ । जय होस ।
गाउँपालिकाको विवाद मिलाउन प्रदेश सरकारद्वारा कार्यदल गठन
गोरखा । जिल्लाको भीमसेन गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद मिलाउन प्रदेश-४ को सरकारले विवाद समाधान कार्यदल गठन गरेको छ। आइतबार बसेको…
६५ वर्षमा पनि यौनेच्छा हटेन, के गरु ?
म ६८ वर्षको पुरुष हुँ । मेरा सबै सन्तान पखेटा हालेर टाढा पुगिसके । यही कारण म ६५ वर्षीय…
बजारमा यसरी सस्तिदै छ सुनचाँदी !
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन अर्थात शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य यथावत नै रहेको छ । बिहीबार छापावाल सुन…
सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी रिसोर्ट सञ्चालन
नवलपुर । नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर सिद्धकुमार श्रेष्ठले पार्क र रिसोर्ट सञ्चालन गरेका छन् ।
पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना हुने
काठमाडौँ । कुनै पनि समाचारका कारण व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुगे १० लाखसम्म जरिबाना हुन सक्ने गरी सरकारले…